Shiinaha D-Glucuronolactone Soosaarka iyo Warshadda | Mingxing
Magaca Ingiriisiga: Glucuronolactone; D-glucuronolactone
CAS MAYA: 32449-92-6
Qaaciddada Molecular: c6h8o6
Miisaanka molikalka: 176.1
Guryaha jirka iyo kiimikada:
Barta dhalaalida: 170-176 oC
Bar kulaylka 403.5 oC at 760 mmHg
Bar dhibic: 174.9 oC
Mawduuca: 98.5% - 102%
Glucuronolactonewaa kiimiko. Waxaa sameyn kara jirka. Waxa kale oo laga helaa cuntooyinka oo lagu sameeyaa sheybaarrada.
Glucuronolactone waa maado caan ku ah cabitaanka tamarta maxaa yeelay waxaa la muujiyey inay wax ku ool u leedahay kordhinta heerarka tamarta iyo hagaajinta feejignaanta.Glucuronolactone ku darista sidoo kale waxay si weyn u yareysaa "ceeryaanta maskaxda" ee sababa xaalado caafimaad oo kala duwan. In kasta oo heerarka glucuronolactone ee cabitaannada tamarta ay aad uga badan karaan kuwa laga helo cuntada intiisa kale, haddana glucuronolactone waa mid aad u ammaan badan oo si wanaagsan loo dulqaadan karo. heerka amniga ee aan la fiirsan-saameynta xun ee glucuronolactone waa 1000 mg / kg / maalin.
Intaa waxaa sii dheer, sida laga soo xigtay The Merck Index, glucuronolactone waxaa loo isticmaalaa sidii sunta sunta ah. Beerka wuxuu isticmaalaa gulukoos si uu u abuuro glucuronolactone, oo xakameynaya enzyme B-glucuronidase (metabolizes glucuronides), taas oo sababi karta heerarka dhiig-glucuronide inuu kaco. Glucuronides waxay isku daraan walxaha sunta ah, sida morphine iyo depot medroxyprogesterone acetate, ayaga oo u rogaya gulucuronide-conjugates-biyo ku milma kuwaas oo ka soo baxa kaadida.Highher blood-glucuronides waxay ka caawisaa ka saarida sunta jirka, taasoo horseed u ah sheegashada in cabitaanada tamarta ay yihiin sunta sunta. Glucuronic acid-ka bilaashka ah (ama is-ester-glucuronolactone) ayaa saameyn yar ku leh sunta sunta marka loo eego gulukooska, [xigasho loo baahan yahay] maxaa yeelay jidhku wuxuu isku dubaridaa UDP-glucuronic acid-ka gulukooska. Sidaa darteed, qaadashada karbohaydrayt ku filan waxay siisaa UDP-glucuronic acid ku filan sunta, [xigasho loo baahan yahay] iyo cuntooyinka hodanka ku ah gulukoosku badiyaa way ku badan yihiin ummadaha horumaray.
Glucuronolactone waxaa sidoo kale lagu dheelitiray glucaric acid, xylitol, iyo L-xylulose, bini'aadamkuna sidoo kale waxay awoodi karaan inay u isticmaalaan glucuronolactone inay yihiin horudhac isku-darka ascorbic acid
Shaqada ugu weyn ee glucuronolactone waa in la wanaajiyo shaqada sunta sunta ee beerka, soo kabashada ama hagaajinta shaqada maskaxda, nidaaminta shaqada difaaca jirka, quudinta maqaarka, daahida gabowga, hagaajinta hypoxia, baabi'inta daalka, iyo xoojinta awooda xakameynta iyo isku dubaridka howlaha xubnaha kala duwan. Cudurka cagaarshowga ee ba'an iyo dabadheeraada, cirrhosis, ama cunto sunta lagu sumoobo eto
Taxaddarrada keydinta: ku keydi bakhaar qabow, qalalan oo hawo wanaagsan leh. Ka fogow dabka iyo ilaha kuleylka. Ka ilaali qorraxda tooska ah. Xirmada waa in la xirxiraa oo laga ilaaliyaa qoyaanka.
Codsiga: cuntada lagu daro, dhexdhexaadka dawooyinka
Hore: Betaine Anhydrous
Xiga: Hordenine hydrochloride
3-Hydroxybutanoic acid cusbo ku jirta